QUBANAHA DOORASHADA: Doorashada Puntland & Wararkii ugu dambeeyey Is haysiga Kuraasta baarlamaanka? – Puntlandtimes
GAROOWE(P-TIMES) – Meel xasaasi ah ayay maraysaa doorashada Madaxtinimada ee Puntland, hardan adag ayay wadaan Siyaasiin, Musharaxiin iyo dadka doonaya in ay xubno ka noqdaan baarlamaanka oo dooranaya Madaxda soo socota ee mandiqada, waxaana ilaa hadda meel adag maraya Hardanka dhinacyada.
Madaxtooyada Puntland waxay dadaal badan galinaysaa sidii ay ku soo saari lahayd musharaxiinteeda u taagan kuraasta baarlamaanka, waxaana gobalada Sanaag, Haylaan, Mudug, Barri & Nugaal-ba loo kala diray saaxiibadii ugu dhawaa ee Madaxweyne Gaas oo raadinaya kuraasta beelahooda.
Ka sokow xaquuqda Dastuuriga ah ee ay xaqqa ugu leeyihiin raadinta kuraastan beelahooda, haddana wararka ayaa sheegaya in lacago badan oo ay ku heleen siyaabo xil-raadineed ay hadda ku baadi-goobayaan Kuraastan, xili ay dadka la socda arrimaha Musuqmaasuqa aad ugu foogan yihiin doorashooyinka Puntland.
Mudug oo ah gobalka ugu badan ee uu hadda ka socdo hardanka adag ayay saaxiibada Madaxtooyada Puntland hadda raadinayaan kuraasta ugu badan, balse waxay la kulmayaan daadad isbedel doon ah oo aan dabyar shideynin, sidaas oo kale kala dhantaalida beelaha qaarkood ayaa la rumeysan yahay in ay caqabad kale ku noqotay.
4 kamid ah saaxiibada Madaxweyne Gaas ayaa loolan adag uga jira arrimaha gobalka Mudug ee kuraas raadinta, balse qaar kamid ah ayay luntay kalsoonida ay ku qabaan beelahooda, taas oo gaarsiisay in ay maraan wadooyin kale, waxaana muuqata hubanti la`aan kuwajahan arrimahaas oo hadda meel xun gaartay.
Wararka Puntlandtimes.com ay ka helayso gobaladda Barri & Karkaar ayaa sheegay in badankooda lagu kala baxay Kuraasta xildhibaanada 21 kursi ee gobaladaas, waxaana muuqata in mid kamid ah musharaxiinta ugu cad-cad Madaxweyne-nimada Puntland uu saameyn badan ku yeeshay, gaar ahaan musharaxiinta Isbedel doonka ah.
PUNTLANDTIMES.COM waxay ogaatay in uu jiray qorshe ay wada galeen musharax & Madaxtooyada oo ku aadanaa kuraasta gobaladaas, laakiin goor dambe la ogaaday in uu qorshahaas meelmari waayay oo mid kamid ah musharaxiinta cabsida laga qabay uu saameyn badan ku yeeshay.
Sanaag waxaa kusugan Agaasimaha xagga Warfaafinta & Dhaqanka ee Madaxtooyada Puntland oo raadinaya kursi Xildhibaanimo, waana mid kamid ah saaxiibada Madaxweynaha waqtigu ka dhamaanayo, wuxuu tagay deegaano kala duwan, wuxuuna lacago qeyb kaga qaatay Wadada Ceel-Daahir iyo Ceerigaabo, taas oo ka dhiganeyd fariin siyaasadeysan.
Ka sokow baddi xildhibaanada gobalada Sanaag & Haylaan ayaa u muuqda kuwa ay ku soo laaban doonaa xildhibaanadii horey u joogay, waxaana yar rajada laga qabi karro Isbedel dhanka xildhibaanada ah oo si weyn ugu dhaca gobalkaas, maadaama la rumeysan yahay in ay hal qorshe ka mideysan yihiin.
17-ka Xildhibaan ee gobalada Sool & Cayn oo ah kuwa ugu badan ee lagu dagaalamayo ayay hadda xaalad adag ka taagan tahay, loolanka ugu badan ayaana ku wajahan oo ay gabi ahaanba daneeyaasha doorashadu saameyn ku leeyihiin, xili uu wali dhex socdo damaca ku saabsan xaaladda dagaal ee Tukaraq oo ah marina an caadi aheyn.
Kaadiriinta Sool iyo Cayn waxay ciyaarayaan talaabo kasta oo ay dib ugu soo laaban karaan golaha baarlamaanka, Garaadka xubnaha ugu badan saxiixaya Garaad Saleebaan Garaad Maxamed wuxuu u jiheystay degmada Taleex, wuxuu la kulmayaa Cuqaasha dhaqanka oo ay ka wada hadlayaan soo xulida xubnahan.
Garaadka oo lagu yaqaano hadal adeyg ayaa la rumeysan yahay in uu xariir wanaagsan kala dhaxeeyo qaar kamid ah Madaxda ugu sareysa Puntland, laakiin todobaadkii lasoo dhaafay ayuu si cad uga hor yimi qorshe horey loogu qabay in uu si fudud uga fulayo oo ku saabsanaa in mudo kororsi iyo dagaal la sameeyo.
Madaxweyne kuxigeenka Puntland CabdiXakiim Xaaji Cumar oo kal hore soo bilaabay loolankiisa Musharaxnimada ayaa dadaal xoog badan ugu jira sidii uu saameyn ugu yeelan lahaa 7 kursi oo laga soo doorto magaalada Buuhoodle, waxaana saameyn ku leh sidaas oo kale Gacan-yarayaashiisii oo qaarkood hadda kusugan Buuhoodle ayna raadinayaan Kuraastaas.
Guddiga Xalinta Khilaafaadka ee baarlamaanka cusub soo xulaya ayaa lafilayaa in la magacaabo bartamaha bisha November ee nagu soo aadan, waxaana loolan adag ka taagan tahay in Madaxweynaha Puntland kaligiis magacaabo iyo In kale, waxaana lafilayaa in Musharaxiintu ay kasoo horjeesan doonan.
Ma sahlana ciyaaraha siyaasadeed ee Kursi raadinta ah oo maraysa meeshii ugu xamaasadda badneyd, si weyn ayaa loogu foogan yahay arrimaha ka socda mandiqada Puntland, waxaana la filayaa in musharaxiinta ugu cad-cad Madaxweyne-nimada ay todobaadyada nagu soo aadan soo gaaraan mandiqada oo si adag uga bilaabanayo Loolanka.
WARSIDAHA PUNTLANDTIMES.COM waxay todobaadkan bilaabaysaa macluumaadyo xasaasi ah oo ku saabsan Musharaxiinta u ordaya Madaxweyne-nimada Puntland, waxaana sidaas oo kale aan baahin doonaa warbixino ku saabsan doorashada gobalada si loo kala soo baxay, XOGTAADA NALA WADAAG.